Taanzaaniyaa: Manneen hidhaa saddeetiitti lammiileen Itoophiyaa 1,900 hidhaa jala jiru - BBC News Afaan Oromoo
Baqattoonni lammiilee Itoophiyaa 554 ta'an ta'an dhiyeenyatti gara biyyaatti deebii'uuf qophii xumuruusaanii Taanzaaniyaatti ergamaan addaa fi aanga'oo guutuun Ambaasadara Itoophiyaa Yonaas Yooseef BBC'tti himan.
Hidhamtoota kanneen kessaayis 300 ol kan ta'an kan argaman magaalaa Taangaa magaalaa guddittii biyyattii Daare Salaamii irraa fageenya km 354 irratti argamtu keessatti.
Galaana Diimaarratti bidiruun garagaluun yoo xinnaate 52 du'an
Kanneen 250 ta'an ammoo, dhiheenya magaalaa guddittii biyyattiitti yoo ta'an, isaaniifis sanadoota imalaa fi baasii isaanii qopheessuu gaggeessuuf yoo xinnaate yeroo torban sadii gadi hintaanee nu barbaachisa jedhaniiru, ambaasadarichi.
Walumaagalattis Taanzaaniyaatti lammiilee Itoophiyaa 1,900 ol mannen hidhaa saddeet keessatti akka argaman Ambaasaadar Yonaas BBC'f mirkanneesaniiru.
Baqattoonni kunneenis gara Afriikaa Kibbaatti qaxxaamuran yoo ta'u, hundisaanii sanada imalaa guutuu akka hinqabannees himaniiru.
Itti dabaluunis, Ambaasaadar Yoonaas Pirezidaantii fi ministira dhimma alaa Taanzaaniyaa waliin marii taasisuu fi hidhamtoota hafan hunda gadhiisuuf fedhii qabaachu beeksiisaniiru.
Haa ta'u malee dhimma hidhamtoota hiksiisuu irratti qondaaltoota motummaa Itoophiyaa olaanoo waliin marii taasisuu barbaachisa jedhaniiru.
Akka Ambaasaadar Yooseef jedhaniittis bara kana dhuma baatii Sadaasaatti lammiileen Itoophiyaa 230 ol gara biyyaatti deebi'aniiru.
Baqattoota lammiilee Itoophiyaa gadhiifaman keessaayis tokko tokkoo kanneen yeroo hidhaasaanii xumuran yoo ta'an, irra caalaan isaanii garuu marii mootummaa Taanzaaniyaa waliin taasifameen dhiifamaan kan gadhiifamaniidha jedhaniiru.